GNU Taler, imwe nzira yeBitcoin yakataurwa naRichard Stallman | Linux Vakapindwa muropa
Ini pachangu, ini handivimbe neBitcoin zvakanyanya. Izvo chete hazviite kuti ndinzwe ndine chivimbo. Uye ini ndazvitaura zvakanaka: chiitiko chega chinofanirwa kunge chiine chekuita nezvisingazivikanwe kana nyowani, kunyangwe kana iri nyowani kwauri. Handizive kana ichi chirevo chingazombochinja mune ramangwana asi, kana zvikadaro, zvichaita nechimwe chinhu senge GNU Workshop, «Imwe nzira», mumakotesheni, ayo anotsvaga Richard Stallan, ndiani musiki weGNU uye GPL, chimwe chinhu chinofanirwa kuve chinozivikanwa kune vedu vese vaverengi.
Asi chii chinonzi GNU Taler? Kusiyana neBitcoin, GNU Taler haisi mari yemadhora, asi a nzira yekubhadhara yakagadzirirwa kushandiswa kuita mari isingazivikanwe kumabhizinesi. Kuti uite izvi, chero munhu anobhadhara anoshandisa siginecha kana chiratidzo, chimwe chakakosha mukutenga kwega kwega kuti uwane mari kubva kuhurongwa. Nezve izvi zvatsanangurwa, ndiyo imwe nzira kune Bitcoin? Chete kana isu tichifunga nezve chikamu chatinobhadhara, uye chingave chakachengeteka.
1 GNU Taler haisi mari
2 Sei Taler?
GNU Taler haisi mari
Stallam anoti «unogona kushandisa account yako yekubhangi kuwana maTaler tokeni, uye iwe unogona kuishandisa uye chero ani anogamuchira mari haazokwanisa kuudza kuti ndiani avabhadhara.«. Izvi zvimwe zvinoyeuchidza nezvekushandisa kwakaitwa nevamwe vanhu vasina kuvimba (uye zvechokwadi vachiri kuita) kutenga pamhepo: kuisa mari mukadhi rakakosha nemari shoma yavanongoshandisa kutenga online. Iyo zvakare inoyeuchidza PayPal, patinongopa email chete kuti tibhadhare kuburikidza nemurevereri Kana Apple Bhadhara, iyo zvakare inoshandisa maTokeni. Musiyano mukuru kubva kumasystem aya ndewekuti GNU Taler iri asingazivikanwe zvachose nguva dzese.
GNU Taler hachisi chinhu icho munhu wese anogona kushandisa izvozvi, izvo zvine musoro kufunga kuti haina kumbovapo kwenguva yakareba, asi iyo European Community inoita kunge inofarira kutsigira iyo yekubhadhara system uye akatoita bvunzo dzakafamba mushe.
Zvekuvanzika. Stallam mutsigiri mukuru wekuvanzika kwevashandisi uye anotenda kuti madhijitari ekubhadhara masisitimu ane njodzi kana asina kugadzirwa kuti ave akachengeteka. Zvakare, munyika dzakaita seChina hapana chinochengetwa zvakavanzika uye Stallman anofarira kuti hurumende hadzisi kuona zviitiko. Matambudziko ese aya anonyangarika kana isu tikashandisa GNU Taler: hapana anoziva kuti ndiani abhadhara chii, asi muripo waitwa. Uchavimba naye here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » GNU Taler, iyo "nzira yeBitcoin" yakataurwa naRichard Stallman
Bvunza kuti unotenga sei iyo isiri yekuwacha kana mari yemushonga?
kwete chete ini handivimbe bitcoin, ini handivimbe nemadhijitari modes,
Sezvo isu takarega kushandisa goridhe doubloons uye nezvimwe, ZVESE mari ndeye digital. Iwo manhamba ari muakaundi yebhangi kana chidimbu chepepa (kana yakasimba simbi alloy) inomiririra imwe kukosha, asi haina iyo yega.
Kunyangwe paine avo vanoti nhasi mhangura yakakosha kudarika kukosha kwainomiririra. Asi ndiyo imwe nyaya…